Torjan Vs CMS (သို့) ဗိုလ်မှူး ... လုပ်အုံး
ကျွန်တော်နှင့် မျှဝေခံစားလိုသော အကြောင်းအရာများ
အခုတလော ဒေါင်းလုပ်တွေ ထိုင်လုပ်နေတယ်။ လိုချင်တဲ့ Software လေးတွေ ebook လေးတွေရတာကတော့ ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာက မောင်မောင် Virus
အင်မတန် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်း။ အများဆုံး တွေ့နေရတာက Trojan Horse။ မသာ Virus တွေ အပြင်မှဆိုလို့ကတော့ လမ်းကြိတ်စက် ငှားပြီးကို သတ်ချင်တယ်။ ဒါမှ မဟုတ် လည်ပင်းကို ကြိုးချည်ပြီး စစ်ကိုင်းတံတားပေါ်မှာ ချိတ်ထားလိုက်မယ်။ တော်တော် ခီးစရာကောင်းတဲ့ Virus တွေ။ Norton ကလည်း ရှာတော့ ရှာပေးရှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ သူကလည်း မူနေတယ် .. မသတ်နိုင်ဘူး။ အခုတော့ အကောင်းဆုံးသတ်ရမဲ့ နည်းလမ်းတွေရှာကြည့်နေတာပဲ။ နည်းလမ်းကောင်းလေးများရှိရင်လည်း ကိုယ်ချင်းစာသောအားဖြင့် လမ်းညွှန်ပေးသွားစေချင်ပါတယ် .. ဟီးဟီး။ ဗိုလ်မှူးလုပ်အုံး လို့ပဲ ထပ်ပြောရတော့မှာပေါ့။
အဲဒီ ဗိုလ်မှူးလုပ်အုံးဆိုတဲ့ စကားလေးက ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်း အကူအညီတောင်းတဲ့နေရာမှာ သုံးတဲ့ စကားဝှက်လေးပါ .. ဟဲဟဲ။ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာ ခင်ဗျ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ ...
သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ကားငှားဖို့ရှာပုံတော်ဖွင့်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ကံကောင်းချင်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက သတင်းတစ်ခုကြားတယ်။ ဂျစ်ကား တစ်စီးရှိတယ်တဲ့။ ငှားမည့်သူကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ သိပ်မရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း။ မေးထူးခေါ်ပြော လောက်ပဲ ရင်းနှီးတာ။ ဒါနဲ့ သူ့အိမ်ကို ကားငှားဖို့နဲ့ ကားကြည့်ဖို့ ချီတက်သွားကြတယ်။ သူ့အိမ်က ဈေးချိုနားမှာ။ ကားရတာ မရတာတော့ မသိ။ သွားရတာနဲ့ ဆီက အရင်ကုန်နေပြီ။ ဟိုလည်းရောက်ရော ကားကိုကြည့်တော့ မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Auto Gear လေး .. ဟီးဟီး။ ကျွန်တော်လည်း ဂျစ်ကို အော်တိုဂီယာတပ်တာ အဲဒါ ပထမဆုံး မြင်ဘူးတာပဲ။ ထားပါတော့လေ။ အဲဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်တယ်။ ကြိုက်လား ဘယ်လိုလဲပေါ့။ အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ပြောကြတယ်။ မိုက်တယ် .. မဆိုးဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီကားကို ငှားမယ်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းရဲ့ မယ်တော်ကို သွားတွေ့ကြတယ်။ ဈေးလေးဘာလေး စစ်ရင်းပေါ့။ ပြောမဲ့သာပြောတာပါ ဈေးက စစ်လို့လည်း မရဘူး :( ။ ဒါနဲ့ပဲ ငှားလိုက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ နောက်ပြီး စရံငွေပေးလိုက်တယ်။ စရံငွေလည်း ရပြီးရော သူကားကိုငှားရင် ဘယ်လို အကျိုးရှိပုံတွေက စပြီး ပြောပါလေရော။ အဲဒီပြောတဲ့ စကားတွေထဲမှာ ဗိုလ်မှူးဆိုတာကြီးက ပါလာပါလေရော။ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ... " မင်းတို့ . ငါ့ကားကို ငှားရင် အေးဆေးပဲ . ကားနဲ့ပက်သက်လို့ ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်လာရင် ဘာမှ မပူနဲ့ ငါ့ဆီကိုသာ ဖုန်းဆက်လိုက် . ငါ့ယောက်ျားက ဗိုလ်မှူး " ဟီးဟီး ... ကျွန်တော်လည်း အဲဒီစကားကိုကြားပြီး တော်တော်ရီချင်သည်။ ဒါပေမဲ့ မရီခဲ့ပါ .. ပေါ်တင်ကြီး ရီတော့ မကောင်းဘူးလေ။ သူကားရဲ့သမိုင်းကြောင်းများကို နားထောင်ပြီး နောက် ၃ ရက်ခန့်ကြာသော် ..
တူးပို့သံတွေနှင့်အတူတူလည်ကြရင်း ကားကိုချီးကျူးနေမိသည်။ မဆိုးပါဘူးပေါ့ ဘာပြဿနာမှလည်း မပေးဘူပေါ့။ ချီးမွမ်းတာ စောသွားသည်။ လည်ရင်းနဲ့ ကျုံးအရှေ့ရောက်တော့မှ ပြဿနာကစသည်။ အော်တိုဂီယာ .. အလုပ် မလုပ်တော့။ အဲဒါနဲ့ စိတ်ထဲကတော့ ဖုန်းတွေဆက်ပြီး ကြိမ်ဆဲနေမိသည်။
"ဗိုလ်မှူး ... လုပ်အုံး .. ဒီမှာ ပြဿနာတက်နေပြီ"
အဲဒီနောက်ပိုင်းကစပြီး ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂျစ်ကားလေးပေါ်မှာ "ဗိုလ်မှူး ... လုပ်အုံး" ဆိုတဲ့ စကားက အရင် ထွက်လာပါတော့သည်။
Tag: Virus, Torjan, Essay
ဘလော့လာပြီး မရေးဖြစ်တာ ၂ နှစ်နီးပါးရှိသွားပြီပဲ။ ဖေ့ဘုတ်တွေပေါ်လာပြီးကတည်းက ဒီဘက်ကိုလှည့်မလာဖြစ်ဘူး။ ပြန်ရေးဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်ပြီးရေးချင်တယ်။ အဓိကကတော့ ဓာတ်ပုံနှင့် နည်းပညာသတင်းတွေကိုပေါ့။
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ရဲ့ ယခုခေတ်နှင့်ကိုက်ညီသော ကဗျာတစ်ပုဒ်
နိုးကြထကြမြန်မာတို့ သားမြေးတို့အတွက် ကြိုးပမ်းစို့
Camera: Nikon D7000 | 35mm, F8 @ 1/200s, ISO 200 Software : Adobe Lightroom, Photoshop © Chan Mya Soe
Chan Mya Soe
April 2008 25
March 2008 30
February 2008 35
June 2007 21
April 2007 41
March 2007 39
February 2007 41
December 2006 16
November 2006 19
October 2006 33
လန်ဒန်စံတော်ချိန် ၁နာရီ နောက်ဆုတ်သွားခြင်း
ဖေဖေနဲ့မေမေ ... သားမွေးနေ့ရောက်ပြန်ပြီ
Asif, Upton park and CMS
Firefox Ver 2.0 သုံးနိုင်ကြပါပြီ
Adobe Captivate 2
ဓာတ်တော်ချိုင့် အမှတ်တရ - ၂
ဓာတ်တော်ချိုင့် အမှတ်တရ - ၁
VoiceComment with EVOCA
စမူ = ဇယ် = ရည်းစား = စော် = ချစ်သူ
ဘလော့ လောက ... ဘလော့ လောက
GabblyChat (or) LiveChat
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ၀န်းကျင်နှင့် ကျောင်းသားဘ၀
Full Moon Day of Thadingyut
Mandalay on Google Earth
ပရက်ဂျော ... ပရောဂျက်
September 2006 40
August 2006 43
July 2006 35
10 Best Mobile
10 Best Smart Phone
၂၀၀၈ ခုနှစ် မြန်မာဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်
2010 Election Burma
၂၀၁၀ အိန္ဒိယ သံချပ်များ
22nd Anniversary of 8888
23rd Anniversary of 8.8.88 Massacre
50th Anniversary of Kachin Revolution Day London
50th birthday celebration of Amnesty
51st Anniversary of Kachin Revolution Day UK
62nd chin national day
၆၃ ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ လန်ဒန်
၆၄ ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနား
၆၄ ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့
64th Anniversary of Burma Martyrs' Day
64th Anniversary of Mon National Day
65th Anniversary of Daw Aung San Suu Kyi Birthday
65th Anniversary of Mon National Day
66th Anniversary of Daw Aung San Suu Kyi Birthday
66th The Mon National Day
8th Anniversary of Buddha Day London
A Jewich Family
A Rainy Day in Tottenham Court Road
AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8 G Testing
Apps and Hacks
Arakan League for Democracy Press Conference
Around The Regent's Park
Ban That Scene
Bangladesh Buddhist Associations
Bay Area Thingyan
Birmingham Buddhist Monastery
Buddha Day London
Buddha Day UK
Buddhist Center London
Buddhist Temple UK London
Burma Day of Prayer
Burma Food Fair London
Burmese Culture Show at Oxford
Burmese Events in London
Burmese events in the uk
Burmese Food London
Burmese New Year 2012
Charlie and Oliver
chin national day
CNN Dan Rivers
cranberry and blackcurrant
Daw Aung San Suu Kyi's Speech at ILO
Daw Aung San Suu Kyi’s Birthday Open Snooker Tournament 2011
denmark thingyan 2010
Donation for Arakanese
Find image on the web
Free Burma Discussion
Freedom Film Show
Freewoman of Galway
FX eight-core processor
HDR South Bank
Hla Hla Win
Human Right Day London 2010
Interational Woma Festival
Kachin ethnic demonstration London
Kachin Revolution Day london uk
Kachin State Day London 2010
Karen Community Association
karen global day of action
Karen National Union - UK
karen people london
Ko Mya Aye's Birthday
Kyaw Swa Joshua
Lens Flare Filter
Lights of South Bank
London Buddha Day
London Burmese Demonstration
London Eye Night Photography
London Thingyan 2010
London Thingyan 2011
London Thingyan 2012
London thingyan 2013
London Thingyan Remix
Mandalay 150th Anniversary
Meeting with Daw Aung San Suu Kyi and Burmese Community (UK)
Moe Yu San 21st Brithday London
mon national day uk
Myanmar Association UK
Myanmar Christian Fellowship's Myanmar Food Fair
N California Thingyan
N-Photo August 2012
N-Photo July 2012
N-Photo The Nikon Magazine April 2012
N-Photo The Nikon Magazine February 2012
N-Photo The Nikon Magazine January 2012
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200mm F/3.5-5.6G ED VR II Lens Testing
nikon commercial song
Nikon Photo Competition
No Vote Burma Election
No Vote Junta's 2010 Election in Burma
NPhoto The Nikon Magazine June 2012
NPhoto The Nikon Magazine March 2012
NPhoto The Nikon Magazine May 2012
oxford motor way
Photomatix Pro 4.0.2 with Tone Mapping 2.0
Photoshop CS5 Crack and Serial
Protest against BBC
Protest to mark Aung San Suu Kyi’s 66th birthday
Regent Street and Oxford Street Xmas Lights 2012
Resize an image in Microsoft paint
resize images in photoshop
Rock and Costume Party Night
Royal Regent Park
Sasana Ramsi Vihara
Second Hand Camera Shop
Simple Selective Colour Photoshop/Camera RAW
Snowing at Tottenham Court Road
South Bank Panorama
SPDC Military Conscription Law
sticky rice festival
Street Art and Graffiti on Brick Lane
Testing light trails (Long exposure)
Testing Nikon 50mm f/1.8 D AF
the anniversary of the 8.8.88 uprising
The Health Benefits of Coffee Vs Tea
The Nox and Friends
The Sanatan Hindu Mandir Wembley
The Symbols of Spring
U Aung Htoo
UK Parliment Talk
Understanding Digital Photography with Bob Krist
Venerable U Uttara
Vicky Bowman's Daughter
Waihnin Pwint Thon
Waso Robe Offering Ceremony London
water festival UK
way to oxford
Welcome Home Nikon
World Record for 8.43GHz processor
Zemana AntiLogger 1.9.2.819
စိုးပိုင် နောနော် သျှီ အောင်လ
ဆရာမ ဒေါ်နုနုရည် (အင်းဝ)
တတိယအကြိမ်မြောက် စာပေဟောပြောပွဲ (စင်္ကာပူ)
တိပိဋကဓရဆရာတော် အရှင်ဂန္ဓမာလာ လင်္ကာရ
ဓမ္မဘေရီ ဆရာတော် အရှင်ဝီရိယ
မန္တလေး နှစ် (၁၅၀)
မန္တလေး နှစ် (၁၅၀) ပြည့် အနုပညာပုံရိပ်ပွဲတော်
မန္တလေး နှစ် ၁၅ဝ
ရတနာပုံ ဒိုင်းမွန်း ပလာဇာ
လန်ဒန် သင်္ကြန် ၂၀၁၀
လဘက်ရည် နှင့် ကော်ဖီ
အဖေ (သို့မဟုတ်) ပဲ့ကိုင်ရှင်
နွေရာသီ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု